अब कता जान्छ नेपाल आईपुगेको सलह? | पहिलो बोली
अब कता जान्छ नेपाल आईपुगेको सलह?
३४९३ पटक पढिएको
कृषि मन्त्रालयका अनुसार हिजो शनिबारबाट नेपालका विभिन्न ठाउँमा सलह किराको बथान देखा परेको छ । विभिन्न ठाउँमा देखा परेको सलहको बथान आगामी दिनमा पश्चिमतर्फ जाने अनुमान गरिएको छ । यो किरा हावाको बेगसँगै हावा बहेकै दिशातर्फ जाने भएकाले भोलीबाट पश्चिमतर्फ जाने अनुमान गरिएको छ ।
आजसम्म दक्षिणबाट उत्तरतर्फ हावा बहिरहेकाले सलह किरा नेपालमा आईपुगेको मौसम विज्ञहरु बताउँछन् । भोली सोमबारबाट हावाको गति पूर्वबाट पश्चिमतर्फ हुने भएकाले सलह पनि पश्चिमतर्फ जाने अनुमान गरिएको छ । आज रातीबाट हावाको गति पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाने भएकाले सहल पनि पश्चिम तर्फै जाने सम्भावना रहेको मौसम विज्ञ प्रतिभा मानन्धर बताउँछिन् ।